I-Architecture Yokuzonwabisa kunye neDisney Design
UbuGcisa bobuGcisa Abakhi bezakhiwo
AbaCwangcisi beZakhiwo Bemihlali kwiWalt Disney Theme Parks kunye neeRishiya
Inkampani yeWalt Disney kufuneka ibe yindawo yokuzonwabisa yokusebenzela. Kwaye abaMntu abasixhenxe abaye bamomotheka ngobuso babo njengoko bebetha "U-Heigh-ho, Heigh-ho, uyayeka ukusebenza!" Kodwa ngubani owaziwa ngabalingisi beesimboli abaya kucelwa ukuba abambe phantsi kwindlu eDisney eBurbank, eCalifornia? Eyilwe ngumakhi waseMelika owaziwayo uMichael Graves , esi sakhiwo saso sihlobo esibalulekileyo sakhiwo sokuzonwabisa .
Disney Architecture Iimfuno ze-Disney Architects
I-Walt Disney Inkampani ayiyona nje yabantwana. Xa u tyelela nayiphina iipaki okanye iehotele zeDisney, uzakufumana izakhiwo eziklanyelwe ngabanye bezakhiwo eziphambili zehlabathi, kuquka uMichael Graves.
Ngokuqhelekileyo, ukupakisha kwepaki yamatye kufana negama lithetha -. Ukuboleka iziganeko ezithandwayo ezivela kwiimbali kunye neenganekwane, izakhiwo zepaki zemixholo zenzelwe ukuxelela ibali. Ngokomzekelo, kuyaziwa ukuba inqaba yaseNewusstein yaseJamani yathintela i-Disneyland yase Sleeping Beauty Castle e-Southern California.
Kodwa iWatt Disney Inkampani yafuna ngaphezulu xa uMichael Eisner ethatha ngo-1984. '' Asikho malunga neebhokisi ezikhuselekileyo. Sisebenza kwishishini lokuzonwabisa, '' u-Eisner utshele iThe New York Times . Kwaye ke inkampani ichaza ukufumana abakhi bezakhiwo zokuphuhlisa izakhiwo zokuzonwabisa.
Abaqulunqi abaye badizalela i-Walt Disney Inkampani
Bonke abakhi bezakhiwo abangenisekanga kwi-commercialism ecacileyo emva kwezakhiwo zokuzonwabisa.
Okubaluleke kakhulu, xa iNkampani yeDisney yayibhalela abacwangcisi be-Disney World ukunweba, uPritzker Laureate uJames Stirling (1926-1992) waphika intuthuko kaDisney-ukuthengiswa kweNdlovukazi yaseBrithani, ukuguqulwa kwabagcini, kunye nezinye izithethe zeral umakhi wokwakha izakhiwo zokukhuthaza ukuthengisa.
Nangona kunjalo, abaninzi abaxhomekeke kwi-postmodernists, bakhupha kumngeni wokuyila i-architecture eyayihlose ukuzonwabisa. Baye bazama ukufumana ithuba lokuba yinxalenye yombuso onamandla wama Disney.
I-Architecture iba ngumlingo, ingaba uyilo lweDisney okanye kungekhona kuma-1980s naku-1990.
URobert AM Stern unokuba nguyena mcebisi omkhulu weDisney. KwiWalt Disney World Resort, i-design yakhe yeBhodiWalk kunye ne-1991 Yacht ne-Beach Club Resorts zihlengahlengiswa emva kwee-resorts zangasese zase-New England kunye neeklabhu-umxholo we-Stern wasebenzisa i-1992 iNewport Bay Club Hotel eParis Disneyland eMarne-La- Vallée, eFransi. Ngaphezulu i-Disneyesque yi-Stern 1992 Hotel Cheyenne eFransi - "ikhulelwe ngomfanekiso weedolophu yaseMelika yaseNtshona-ntshona yekhulu le-18, kodwa ihlanjwe ngeplanga lendawo yaseHollywood .... I-Cheyenne i-dolophu yedwa." Intsingiselo "ye-lens yaseHollywood" yiyo, eyona nto yaziwa ngokuba yi "Disney version" kwaye kungekhona i-1973 i-horror tale yamarobhothi ehambile kwifilimu yaseWestworld nguMichael Crichton.
Umqambi waseNew York owaziwa ngeendlela zakhe zokuziqhelanisa ezisemadolobheni, i-Stern yavelisa ubugcisa bemihla ngemihla e-Disney Ambassador Hotel ngo-2000 e-Urayasu-shi, eJapan - isakhiwo "esibhekisele emuva kwisakhiwo sokumela esithembisa isithembiso, umlingo kunye nobuhle ixesha apho ukuhamba kunye neemafilimu kwakuyibaleko yothando. " I-Stern iphinde ibambe iqela le ntshukumo entsha .
Ngo-1997 i-Stern yenkampani yokwakha izakhiwo, i-RAMSA, yonyulwa ukuyila iSicwangciso soPhuhliso se-Disney esilungeleleneyo esibizwa ngokuba yiSigufi, eFlorida. Kwakungenxa yoluntu lwangempela, apho abantu bokwenene bahlala kwaye bahamba ukuya e-Orlando, kufuphi nelokuhamba emva kwendawo yokulala yaseMantla yabantwana, iibhayisikili kunye nezilwanyana ezihlala kuyo. Abaqulunqi bezithuba zePostmodernist babenqwenela ukuyila izakhiwo zasezidolophini ezidlala, ezifana neHolo leKapa eliseKhaya elingu-Pritzker Laureat uPhilip Johnson kunye ne - movie ye -Googie-styled movie eyenzelwe nguCesar Pelli. UMichael Graves wakha iposi epostile ekhangeleka njenge-lighthouse, okanye i-silo, okanye ukutshaya kwinqanawa. Indwendwe yeGraham Gund yenzelwe ukuba iindwendwe zifikelele kwi-1920 yaseFlorida ukuphumla, kodwa uRobert Venturi noDenise Scott Brown baceba ibhanki lendawo ukuba libukeke njengeJP elidala
Umgodlo kaMorgan kwiConer of Wall Street eMzantsi Manhattan - yonke into enomdla.
Umqambi waseColorado uPeter Dominick (1941-2009) wayesazi indlela yokuyila iDisney's Wilderness Lodge kunye neFowings Kingdom Lodge - i-rustic esekelwe kumaRockies aseMerika. I-whimsical Michael Graves (1934-2015) ifakwe ama-swans kunye namahlengethwa, amagagasi kunye neengqungquthela ekwakhiweni kweWalt Disney World Swan kunye neWalt Disney iWorld Dolphin hotele. UCharles Gwathmey (1938-2009) wenza i-Bay Lake Tower ukuba ibonakale njengeziko lendibano yanamhlanje kunye nehotele, oko kwakunjalo.
Abasebenzi be-Disney basebenza kwizakhiwo zeofisi zeTeatney, ezisehlabathini elixhomekeke phambili ukuba zibukeke njengeemifanekiso. Isakhiwo sekomkhulu saseMurbank sikaMichael Graves esiseBurbank, eCalifornia. Umakhi waseJapan u- Arata Isozaki usebenzisa iindlebe kunye neendlebe zegundane ngaphakathi kwe-Orlando, e-Florida Team Disney.
Umqambi wase-Italy u-Aldo Rossi (1931-1997) wenza i-Celebration Place, i-ofisi yesigxina esine-drive-by lesson of postmodernism kwimbali yokwakha . Xa uRossi wayinqobe umvuzo wePritzker ngo-1990, ijaji yayicacisa umsebenzi wakhe ngokuthi "unobungqingili kwaye uqhelekileyo, ungenayo inveli, ubukeka bubuqili obuqabulayo kodwa buyinkimbinkimbi kakhulu kumxholo kunye nentsingiselo." Ngulo lwakhiwo lwezakhiwo zeDisney.
Disney Design Specifications
Kwi-Disney, abakhi bezokwakha (1) bazama ukubaluleka kwembali kwaye bavuselele izakhiwo zembali; (2) thabatha indlela yokuhamba kunye nokunyanisela imifanekiso yamabali; (3) ukudala imifanekiso engabonakaliyo; okanye (4) wenze zonke ezi zinto.
Njani? Khangela i-Swan kunye neDolph ehotele ezenziwe nguMichael Graves. Umakhi wezakhiwo udala indawo yokufunda ibali ngaphandle kokungena kwizinzwane zaso naluphi na uhlobo lweDisney. Imizobo emikhulu yama-swans, ihlengethwa, kunye neigobolondo azigcini nje ngokubulisa intetho nganye, kodwa zihlala kunye neendwendwe ekuhambeni kwabo. Imifanekiso iyindawo yonke. Kufuphi kufuphi ne-EPCOT kwi-Walt Disney World ® Ihotele, umxholo wezakhiwo zeehotele awuyi kuthatha kuphela amanani anjengeencwadi-ndaba, kodwa kunye nemimandla engqongileyo njengomxholo wabo. Njengama-swans namadonphins, amanzi kunye nelanga zindawo zonke. Amagquma aqoshiwe njengemibhobho kwi-facade yehotele. Ihotele ngokwayo iyindawo yokuzonwabisa.
Yintoni i-Architecture Architecture?
Izakhiwo zokuzonwabisa ziyilo lwakhiwo lwezakhiwo zorhwebo ngokugxininisa kwiingqungquthela. Indlela ephakanyiswe ngokukodwa kunye / okanye ichazwe yoshishino lokuzonwabisa, kunye ne-Walt Disney Inkampani ekhokela indlela.
Unokucinga ukuba ezo zakhiwo zoonwabo zizakhiwo zecandelo leemidlalo kunye neendawo zokuzonwabisa, kunye nezakhiwo ezicwangciswe kuphela ngabacwangcisi beDisney. Nangona kunjalo, i-time building yokuzonwabisa ingabhekisela kuyo nayiphi na isakhiwo okanye isakhiwo, kungakhathaliseki ukuba yeyiphi indawo kunye nomsebenzi, ngaphandle kokuba yenzelwe ukuvuselela ingcamango kwaye ikhuthaze imfesane kwaye ikhuphe. I-Frank Gehry eyenzelwe iWalt Disney Concert Hall yaseCalifornia ingaba yindawo yokuzonwabisa, kodwa i-design yayo i-Gehry ecocekileyo.
Eminye imisebenzi yokuzicwangcisa izakhiwo zokuzonwabisa izakhiwo zokudlala eziqingqiweyo eziqingqiweyo.
Ezinye zibonisa iziqingqi ezinkulu kunye nemithombo. Ukuzicwangcisa izakhiwo ngokuqhelekileyo kuthathwa njengexesha eliqhelekileyo ngenxa yokusebenzisa iindlela eziqhelekileyo kunye neenkcukacha ngeendlela ezingalindelekanga.
Imizekelo yeZakhiwo zoLonwabo
Mhlawumbi umzekeliso obalaseleyo wokwakha izakhiwo zokuzonwabisa ujonga amahhotela eenhloko. Ngokomzekelo, i-Luxor Hotel eLas Vegas, yenzelwe ukuba ifane nepiramidi enkulu elandeleleneyo. E-Edmonton, e-Alberta, eCanada, iHotylandland Hotel ikhuthaza ukukholelwa ngokukhupha amagumbi kwimixholo eyahlukeneyo, njenge-Old West kunye nobuqaqawuli bamaRoma basendulo.
Uzakufumana imizekelo emininzi yokwakha izolonwabo kwi-Disney World kunye namanye amapaki. I-Swan kunye neDolph Hotels zingabonwa njengezakhiwo zokuzonwabisa ezifana neendwendwe zifumana iintaka ezinkulu ezinkulu ezijikelezayo ngeefestile zibe yi-lobbies. Yindawo ekuye kuyo kunye nayo. Ngokufanayo, i- pedagement e-Disney kwi-Burbank, eCalifornia ayixhaswanga ngamakholomu aseKlasini kodwa ibanjwe ngabaSebenzi abaMathandathu. NoDopey? Uphakamileyo, ngaphakathi kwendandatho, akufani nanoma yimuphi umzobo ongumfanekiso owake wambona.
Enye yemithombo engcono kwiinkcukacha ezichanekileyo kwizakhiwo kwiindawo zokuhlala kwiindawo zeRisney kwilizwe lonke likwakha Iphupho: I-Art of Disney Architecture eBhete Dunlop. Ungavumeli igama elithi "Disney" kwisiqhelo sesicatshulwa. Ukwakha Iphupha akusikho isikhokelo sokuhamba, ibali lebali okanye umntwana othandana ngoshukela we-Disney empire. Kunoko, incwadi ye-Dunlop epapashwe ngophando luyihlolisiso lwezinto ezicwangcisiweyo kunye nezihlandlo eziqhelekileyo ezifumaneka kwiipaki zeeDisney, amahotele kunye namaziko eenkampani. Kwiphepha elingaphezulu kwamakhulu amabini kunye nokugxila kwiminyaka kaMichael Eisner, ukwakha iLoto kubandakanya udliwano-ndlebe nabakhi bezakhiwo, imidwebo kunye neefoto zemibala kunye nebhayisili ebalulekileyo.
Umbhali Dunlop ubhale ubuninzi bezokwakha izakhiwo, ukwakhiwa, kunye neendwendwe zokuhamba, kunye nokugxeka umklami kwi- Miami Herald iminyaka elishumi elinesihlanu. Ukwakha Iphupha, i- Dunlop iya kwi-Architectural Disney kunye nenkathalo kunye nomntu ongu-anthropologist. Uhlola imidwebo yembonakalo yembali kunye neefoto zembali kwaye uqhuba intlaniswano olunzulu kunye nabaqulunqi, "abalingisi" kunye neenkokheli zenkampani.
Abathandi bezobugcisa bayakuxhamla ibali elingaphakathi kwendlela abaqeshwe ngayo abakwa-Eisner abaqeshwe bakwazi ukubandakanya i-Disney motifs kwizinto eziyinkimbinkimbi kwaye eziqhelekileyo ezingabonakaliyo. Ukwakha Iphupha yincwadi efundwe ngama-anecdotes: Sifunda ngokuncintisana ngokukrakra ukwakha iihotele ze-Swan kunye neDolphin kunye namafilosofi aseMpuma avela kwi-Team Disney eyakhayo ye-Isozaki. Senza i-dizzy kwaye ngamanye amaxesha siyaphazamisa izibonda ukusuka Disneyland ukuya kuWalt Disney World ukuya kwi-EuroDisney. Ixesha eliqhelekileyo lobugcisa, njenge-"scuppers kunye neparapet" lingashiya abafundi abathile, kodwa i-Dunlop ithoni ikhululekile kwaye incokola. Abadlali beDisney abazinikeleyo banqwenela ukuba i-Dunlop ichithe ixesha elingakumbi kwi-Cinderella's castle kunye neThunder Mountain.
Nangona kwintsuku yayo yokuqala, iWalt Disney Inkampani yanikela ubungqina bezakhiwo zokwakha. I-Dunlop ibonisa ukuvela kwe-Disney Main Street, iHlabathi yeHlabathi kunye namaziko okuqala. Ngona kunjalo, i-Dunlop, i-architectural architecture yenziwe xa uEisner ethatha inkampani ngo-1984. Xa u-Eisner wayala abaqulunqi bamaphunga ukuba benze izixhobo ezintsha zeDisney kwihlabathi jikelele, iingcamango ezibhaka kwiindawo zokwakha zanamuhla zaziswa kubantu. Oku kubaluleka kwezakhiwo zeDisney.
> Disney Deco nguPatricia Leigh Brown, i -New York Times , ngo-Apreli 8, 1990 [kufumaneka ngo-Oktobha 2, 2015]
> Ifoto eyongezelelweyo yeZakhiwo zeCandelo Disney eBurbank, eCalifornia nguGeorge Rose / Getty Izithombe; Iifoto ezongezelelweyo ze-Swan kunye neDolpin Hotels zizuze i-Swan & Dolphin Media
> I-WDW Architecture, http://www.magicalkingdoms.com/wdw/more/architecture.html [kufumaneka ngoJanuwari 25, 2018]
> I-RAMSA, i-Hotel Cheyenne, http://www.ramsa.com/project-detail.php?project=451 kunye ne-Disney Ambassador Hotel, http://www.ramsa.com/project-detail.php?project=453&lang= en [kufumaneka ngoJanuwari 28, 2018]
> Umvuzo wePritzker, i-https: //www.pritzkerprize.com/laureates/1990 [kufumaneka ngoJanuwari 26, 2018]
Izakhiwo kunye neeprojekthi zikaJean Nouvel
Iimbono ezivela endlwini kaFrank Lloyd Wright Beautiful
UFilipu Johnson, Uhlala kwiNdlu ye-Glass
Eero Saarinen Iphothifoliyo yemisebenzi ekhethiweyo
I-IM Pei, uMyili wee-Geometries ze-Glass
Ukuhlanjululwa Ngomgama owenziwa nguWitold Rybczynski
I-Biography ka-Andrea Palladio
20 Abasetyhini beZakhiwo zokuLwazi
Isingeniso kuMqulunqi uEduardo Souto de Moura
Ikholeji ye-Reed GPA, i-SAT kunye ne-ACT
Injongo kunye nomxholo wesiNgesi saseArabhu Mashallah
Ukuthengisa - ukuthengisa
Iinyathelo ze-DNA Replication
I-Yasaka Anti Anti Ithebula lokuThabathela kweBhodi yeTrabhoni
CLEVELAND Igama lomnini igama kunye nemvelaphi
Yintoni ongayenza xa Uhluleka iCandelo kwiKholeji
Uvavanyo lwe-PSAT lokuFunda
Imbali emfutshane yeRoma
Inkcazo yeNgxelo yokuLawula
Ubomi be-Olympic Gymnast Simone Biles
Yiyiphi i-Existentialism? Imbali ye-Existentialism, Existentialist Philosophy
Liyintoni iSiphepho seTropical?
Iziseko zezemidlalo: I-Softball kunye neMigqaliselo yeBhola kunye neMimiselo
Iziqithi kwiMfudlana (c1951) ngu-Ernest Hemingway
Ukususwa kweLeaf kunye neSenence